Waa Geesiga Aan Loo Heesin-Halyayga Liverpool Ee Phil Thompson Oo Magacaabay Xidiga Magacyada Shaxda Jurgen Klopp Ugu Horeeya. - GOOL24.NET
Waa Geesiga Aan Loo Heesin-Halyayga Liverpool Ee Phil Thompson Oo Magacaabay Xidiga Magacyada Shaxda Jurgen Klopp Ugu Horeeya.
Liverpool ayaa haysata ciyaartoy kooxdeeda aad muhiim ugu ah waxaana inta badan laga hadlaa saamaynta Virgil Van Dijk, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, Alisson Becker laakiin halyayga Liverpool ee Phil Thompson ayaa aaminsan in uu jiro xidig kale oo dhamaan ciyaartoydan kaga horeeya magacyada shaxda Jurgen Klopp ee Reds.
Phil Thompson ayaa ku dooday Georginio Wijnaldum uu yahay xidig ayna inta badan jamaahiirta kooxdiisa fahmin sida uu muhiim ugu yahay Reds balse waxa uu ku dooday in xidiga reer Holland uu yahay kan ugu muhiimsan ee magacyada shaxda Jurgen Klopp ugu horeeya.
Kabtankii hore ee kooxda Liverpool ee Phil Thompson oo tartanka koobka kooxaha Yurub ugu soo guulaystay Liverpool ayaa Georginio Wijnaldum barbar dhigay xidigii hore ee Reds ee Ray Kennedy kaas oo uu sheegay in xataa dadka qaar ay eedayn jireen balse muhiimad wayn Reds u lahaa.
Phil Thompson oo hadda ka mid ah khabiirada Sky Sports ayaa isaga oo ka hadlaya muhiimada Gini Wijnaldum isla markaana barbar dhigaya Ray Kennedy ayaa yidhi: “Anigu dad badan ayaan u sheegay, waxaanu soo lahayn Ray kennedy, taageerayaashu waligeedba way ka caban jireen isaga, laakiin waxaanu ogayn sida uu isagu u fiicnaa, waxaa la mid ah Wijnaldum, waxaa waajib ah in uu magaca kowaad ee shaxda kooxda uu noqdo”.
Phil Thompson ayaa arin cajiib ah ku amaanay Gini Wijnaldum wuxuuna yidhi: “Isagu waxa uu leeyahay aqoon badan iyo foojignaan ama soo jeeditaan oo uu ku garanayo halka uu garoonka ka joogo. Waa ciyaartoy si fiican hibo uga leh nimanka xirfada dahabiga ah leh ee safka hore”.
Phil Thompson oo ka hadlaya goolkii cajiibka ahaa ee uu Gini Wijnaldum ka dhaliyay kulankii Bournemouth ee xataa xanuunsanayay ayaa yidhi: “Goolkiisii usbuuc dhamaadkii hore waxa uu ahaa mid cajiib ah. Isagu waa mid ka mid ah geesiyada aan loo heesin ee kooxda Liverpool”.
Jurgen Klopp ayaa sidoo kale amaan wayn huwiyay Georginio Wijnaldum kadib guushii kulankii Bournemouth kadib markii uu si layaableh u ciyaaray isaga oo labadii habeen ee kulankaas ka horeeyay xanuun adag wajahay isla markaana matag badan iyo shuban si deg deg ah uga soo kabsaday.
Georginio Wijnaldum ayaa xili ciyaareedkan ka mid ahaa ciyaartoyda udub dhexaadka u ahaa khadka dhexe ee Liverpool isaga oo hadba shaxda Klopp kula soo bilaabanayay Fabinho, Naby Keita, Jordan Henderson iyo James Milner.